The Best Way naghachi ehichapụ Notes on iPad 2 na iPad 3
> Resource> iPad> The Best Way naghachi ehichapụ Notes on iPad 2/3
Data ọnwụ ọnọdụ
"Ị na-enwe na-agbake ehichapụ ndetu na ihe iPad 3? M nwere ọtụtụ ihe dị mkpa ndetu mmadụ na mberede ehichapụ si m iPad 3. anaghị m nwere ndabere maka ha. Ugbu a, m na-eche ma ọ bụrụ na e nwere ohere ọ bụla na m nwere ike weghachite ha. Biko nye m ndụmọdụ gị. "
E nwere nza nke data ọnwụ ọnọdụ dị ka e kwuru n'elu. Mgbe ị na-ehichapụ ndetu si gị iPad, e nwere ụfọdụ Atụmatụ na ị chọrọ ịnọgide n'uche gị.
2 bara uru Atụmatụ maka data ọnwụ
1. Nịm gị iPad n'ime ụgbọ elu mode ozugbo.
2. Kwụsị eji gị iPad ihe ọ bụla.
Na-echeta abụọ ndị a Atụmatụ pụrụ obi sie gị ohere ka mma na-agbake ehichapụ ndetu na iPad 2 na iPad 3. Ozugbo ị na-anọgide na-eji iPad, ị ga-ike ọhụrụ data na ya. Echefuola data n'ezie na-aga nanị mgbe ọ na-overwritten. Ya mere, ọ bụ nnọọ dị mkpa iji chebe iPad-e na n'ihu gị naghachi furu efu ndetu na ya.
Ihe ị chọrọ maka agbake ndetu na iPad 3/2
Wondershare Dr.Fone Maka iOS, Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac)
Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute n'okpuru nwere a na-agbalị for free.
Naghachi ehichapụ ndetu si iPad 2 / iPad 3 na nzọụkwụ
N'agbanyeghị na ị na-eji Windows version ma ọ bụ Mac version nke Wondershare Dr.Fone maka iOS, na interface nke usoro ihe omume na mgbake nzọụkwụ ndị yiri. Nke ahụ bụ ikwu, sị, a ndu adabara agbake ndetu na iPad 2/3 na Windows na Mac OS X.
Wondershare Dr.Fone Maka iOS na-enye gị abụọ iche iche nke mgbake mode: Naghachi si iOS Ngwaọrụ na-agbake site iTunes ndabere File. Ebe ọ bụ na ị na-adịghị ihe iTunes ndabere faịlụ, ụzọ kasị mma na-agbalị iji naghachi n'aka iOS Ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị omume na jikọọ gị iPad 2/3
Ugbu a, na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị mgbe wụnye ya. Mgbe ahụ jikọọ gị iPad 2 ma ọ bụ iPad 3. Mgbe ihe omume ahụ na-amata gị iPad, ọ ga-egosi na ị na window dị ka ndị a.
Nzọụkwụ 2. iṅomi gị iPad 2 / iPad 3 n'ihi na ehichapụ ndetu
Ọzọ, naanị ihe ị chọrọ ime na-na ịpị Malite iṅomi button-egosi na ahụ window n'elu. Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-na usoro nke ịgụ isiokwu gị iPad. Akwụpụla gị iPad n'oge iṅomi, ma ọ bụ ị ga-mkpa malite n'elu.
Nzọụkwụ 3. Preview na-agbake ndetu na iPad 2 / iPad 3
Mgbe iṅomi dị n'elu, ị nwere ike ihuchalu hụrụ ndetu tupu n'ịrụ mgbake. Pịa na Notes nhọrọ na n'aka ekpe nke window, na i nwere ike ịgụ niile recoverable ndetu n'ebe ahụ. Mgbe ahụ nne Mmetụta ihe ị chọrọ na pịa na Naghachi button na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Ndepụta nke Best File Iweghachite Software maka 2013